Taariikhda - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay sanadkii 1993 iyada oo la maalgaliyay RMB 300,000, aagga ay shirkaddu qabsatay waa 5,000 oo mitir murabac ah, tirada shaqaalahana waa 32 nooc oo gogosha gogosha leh waa sheyga ugu muhiimsan. Dhaqdhaqaaqa sanadlaha ah wuxuu kudhowaad RMB 3,000,000
Sanadkii 1997, Xuzhou Home World Wood Co., Ltd. waxaa lagu aasaasay maalgashiga RMB8,000,000, oo daboolaya 33,000 mitir murabac ah isla markaana leh in ka badan 200 oo shaqaale ah. Sannadkan, awoodda wax soo saarka oo ay ku jiraan filimku wuxuu wajahay plywood, plywood ganacsi.
Sannadkii 2008, RMB 20,000,000 ayaa la maalgeliyey si loo ballaadhiyo warshadda oo laga dhigo 50, 000 oo mitir murabac. Waxaana la kordhiyay tirada shaqaalaha ilaa 500. Waqtigaan la joogo, waxaan sanad walba bixinaa 10, 000 mitir cubic mitir plywood qurxoon iyo 30,000 mitir cubic kale plywood. Dhaqdhaqaaqa sanadlaha ah wuxuu u kacayaa RMB 160,000,000
Iyadoo maalgashi dhan 120 milyan oo yuan, Home world group ayaa la aasaasay, oo daboolay 133,000 mitir murabac ah. Waxay sanadkii soo saartaa 250,000 oo mitir cubic mitir ah oo plywood wajahay, 23,000 mitir cubic mitir plywood, 100,000 mitir cubic mitir plywood iyo 5,000 mitir cubic kale plywood gaar ah. Qiimaha waxsoosaarka sanadlaha ah waa illaa RMB 4,000,000,000.
2011 - Maanta
In ka badan 20 sano horumar, hadda senso waxay leedahay in kabadan 9 shirkado hoosaadyo leh iyo shirkado heysta.
KOOXAHA CAALAMKA GURYAHA SUBSIDIARIES
- ROC international trading Co., Ltd. - Dhoofinta & Soo dejinta ganacsiga, Naqshadaynta Plywood iyo Kormeerka
- Zhengquan Wood Co., Ltd. - Soosaaraha plywood-dhisme
- Zhanpeng alwaax Co., Ltd. - Soosaaraha plywood-dhisme
- Lifeng Alwaaxda Warshadaha Co., Ltd. - Soo saaraha plywood-ka ganacsiga
- Tongshun Wood Co., Ltd. - Xirxirida soo saaraha plywood
- Zengyin Wood Co., Ltd. - Looxa iskudhafka LVL, soosaare LVL
- FANS Furniture Co., Ltd. - Soo saaraha alaabta guriga